#Kalfadhiga afaaraad ee Aqalka sare oo lasoo xiray - Get Latest News From Horn of Africa
#Kalfadhiga afaaraad ee Aqalka sare oo lasoo xiray
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ayaa soo xiray Kalfadhiga afaraad ee Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya kasoo socday mudo afar bil ah.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Guddoomiyaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Cabdi Xaashi C/llaahi, ayaa lagu sheegay in uu xirmay Kal-fadhiga Afaraad ee Aqalka Sare.
Warqaddan ayaa dhammaan Senotarrada Aqalka sare loogu sheegay in uu xirmay Kal-fadhiga 10-ka Bishan Jannaayo 2019-ka, isagoo dib u furmi doono 10-ka Misha Maarso ee isla Sanadkan, sida lagu qeexay go’aankii Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare kulankoodii 14-aad ee qabsoomay 5-tii Bishan Jannaayo.
Go’aankan ayaa loo cuskaday qodobbada 74-aad iyo 23-aad ee Dastuurka ku meel gaalka ah, kaas oo qabo in Goluhu uu Sanad kasta yeelanayo Laba Kal-fadhi, mid kastana uu socon doono muddo Afar Bil ah.
Xiritaanka kalafadhiga afaraan ee Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kusoo aaday ayadoo xiriirkii iyo wada shaqeyntii kala dhaxeysay Golaha Shacabka uu hakad ku jiro, xili Golaha Shacabka uusan jawaab ka bixin eedeymo loo Aqalka sare u jeedoyay oo ay ka mid ahaayeen in awoodihii dalka ee sharci dejinta iyo xiriirkii dibadda uu isku koobay.
Waxaa su’aal la iska weydiinayaa waxa uu guddoomiyaha Golaha Aqalka sare uu ku doortay in qoraal uu ku xiro kala fadhiga Golaha ayadoo la heli karay in Golaha oo kulan leh uu ka sheego in uu xiranyahay kalafadhiga afaraad ee Golaha.